Ny fahatsapako voalohany - Geofumadas
Ny fahatsapana voalohany
Supermap - vahaolana matanjaka 2D sy 3D GIS
Supermap GIS dia mpamatsy tolotra GIS efa ela ary manana firaketana an-tsoratra hatramin'ny nanombohany tamina vahaolana marobe tamin'ny tontolon'ny geospatial. Niorina tamin'ny 1997 ny vondrona manam-pahaizana sy mpikaroka miaraka amin'ny fanohanan'ny Akademia Sinoa momba ny siansa, ny fototry ny ...
Bentley Systems BIM Ny fahatsapana voalohany
Leica Airborne CityMapper - vahaolana mahaliana amin'ny sarintany an-tanàna
Tena azo inoana fa tsy hahita SmartCity tena izy isika, miaraka amin'ny fahitana tonga lafatra. Azo inoana fa misy filàna lehibe kokoa eo amin'ny tontolontsika noho ny mieritreritra Internet amin'ny zavatra. Ao anatin'izany, izay ataon'ireo mpamokatra vahaolana dia tsy nisy nanontany azy ireo. Ny marina dia ny fifaninanana hazakaza-pijoroana ...
BIM DigitalTwin IoT Ny fahatsapana voalohany SmartCities
Fiantraikan'ny fiovàna avy amin'ny ArcMap mankany ArcGIS Pro
Raha ampitahaina amin'ny kinova Legacy an'ny ArcMap, ArcGIS Pro dia rindranasa maivana sy mifampiresaka kokoa, manamora ny fizotrany, ny visualisation ary ny mampifanaraka ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny interface mahazatra azy io; azonao atao ny misafidy ny lohahevitra, ny firafitra mody, ny fanitarana ary tsy mila miahiahy momba ny famongorana azy ireo ianao raha misy fanavaozana vaovao. Inona koa no azontsika antenaina ...
ArcView ESRI Ny fahatsapana voalohany
ArcGIS-ESRI, Pirinty voalohany
Manana angona LiDAR aho - inona izao?
Ao amin'ny lahatsoratra iray tena mahaliana navoakan'i David Mckittrick vao haingana, izay niresahany momba ny fiantraikan'ny fahalalana sahaza ny teknika mifandraika amin'ny fiaraha-miasa amin'ny LiDAR ao amin'ny GIS ary ny fanondroana ny Global Mapper ho fitaovana fanohanana amin'ny fikirakirana ny angona azo. Rehefa avy namaky ilay lahatsoratra aho dia nidina ...
Ny fahatsapana voalohany My egeomates
MDT, vahaolana tanteraka ho an'ny tetikasa Fanadihadiana sy tetikasa
Miaraka amin'ny mpampiasa 15,000 mahery any amin'ny firenena 50 ary misy amin'ny Espaniôla, anglisy, frantsay ary portogey amin'ny fiteny hafa, MDT dia iray amin'ireo fampiharana miteny espaniola ankafizin'ny orinasa natokana ho an'ny geoengineering. Ny APLITOP dia manana fianakaviana efatra fampiharana: tetikasa topografika, fampiharana an-tsaha miaraka amin'ny gara tanteraka ...
Mazava ho azy fa AutoCAD Ny fahatsapana voalohany
AutoCAD-Autodesk, Featured, Engineering, Pirinty voalohany, topografia
XPERIA mini X10, fihaonana voalohany amin'ny Android
Ao anatin'ny drafitr'i Geofumadas ho an'ny taona 2012 dia ny fitsapana ireo rindranasa Android, amin'ny fiheverana fa fironana tsy azo ovaina izany. Fantatsika fa Apple dia hitazona ny toerany tsara foana eo amin'ny sehatry ny finday fa tsy toy ny zavatra rehetra mihodina ao ambadiky ny faribolana mihidy Apple, Android dia tsy maintsy hivoatra. Noho izany ...
Android iPad Ny fahatsapana voalohany
Jery ​​voalohany: Dell Inspiron Mini 10 (1018)
Raha mieritreritra ny hividy Netbook ianao, angamba ny Dell mini 10 dia mety ho safidy. Manodidina ny 400 dolara amerikana ny vidiny, ambany noho ny Acer Aspire One tany am-boalohany. Izy io dia mihoatra na latsaka (ambany noho ny maro) mitovy amin'ny Acer D255-2DQkk, izay manazava fa ity kinova ity (1018) dia efa ...
Acer hiandrandra Dell Mini Ny fahatsapana voalohany
Engineering, Pirinty voalohany
Mobile Mapper 10, sary voalohany
Taorian'ny fividianan'i Trimble an'i Ashtech dia nanomboka nampiroborobo ny vokatra Mobile Mapper i Spectra. Ny tsotra indrindra amin'izy ireo dia ny Mobile Mapper 10, izay tiako hojerena amin'ity indray mitoraka ity. Ny kinova Mobile Mapper Pro, CE ary CX dia nifarana teo na dia eo an-tsena aza io ...
GPS Ny fahatsapana voalohany
cadastre, Featured, GPS / Fitaovana, fanavaozana, Pirinty voalohany
Bentley Map PowerView V8i, fahatsapana voalohany
Nahazo kinovan'ny PowerView V8i Select Series 2 (Version 8.11.07) aho, ny tsipika ara-toekarena ao amin'ilay faritra an-tsarintany izay antenain'i Bentley hitrandrahana. Hanombohana azy, ny sasany amin'ireo fisalasalako dia nesorina tamin'ny lahatsoratra teo aloha rehefa nasehoko ny andalana telo amin'ny faritra geospatial ho an'ny 2011. Hanombohana, fa tsy ho iray ...
Bentley Systems Ny fahatsapana voalohany
Mpijery TatukGIS… mpijery tsara
Hatreto dia iray amin'ireo mpijery angona CAD / GIS tsara indrindra (raha tsy tsara indrindra) hitako, maimaimpoana sy azo ampiharina. Tatuk dia andiana vokatra teraka tany Polonina, andro vitsivitsy lasa izay dia nambara ny kinova 2 an'ny tatukGIS Viewer. Ireo mpijery hafa Raha manome lanja ireo programa maimaimpoana amin'ny marika hafa izahay, ...
Acer hiandrandra ArcView Bentley Systems DGN dwg ESRI Google Earth KML samy hafa GIS Ny fahatsapana voalohany shp
jeospatial - GIS, fanavaozana, Pirinty voalohany
uDig, fahatsapana voalohany
Alohan'ny nijerentsika ireo fitaovana loharano misokatra hafa ao amin'ny faritra GIS, anisan'izany Qgis sy gvSIG, ankoatry ny programa tsy andoavam-bola izay efa nandramantsika teo aloha. Amin'ity tranga ity dia hataontsika amin'ny User-Friendly Desktop Internet GIS (uDig), iray amin'ireo tonga ao amin'ny PortableGIS. Avy aiza ny uDig dia fananganana ...
Acer hiandrandra DGN dwg GPS Grass gvSIG OS KML samy hafa GIS Ny fahatsapana voalohany QGIS
jeospatial - GIS, GvSIG, Pirinty voalohany, uDig
TopoCAD, mihoatra noho ny Topo, mihoatra ny CAD
TopoCAD dia vahaolana fototra nefa feno ho an'ny fanadihadiana, ny fanaovana sary CAD, ary ny famolavolana injeniera; na dia manao mihoatra noho izany aza izy amin'ny evolisiona izay nitondra azy 15 taona mahery taorian'ny nahaterahany tany Suède. Izao dia miparitaka erak'izao tontolo izao, amin'ny fiteny 12 sy firenena 70, na dia toa tsy nahatratra ny ...
Autodesk Bentley Systems DGN dwg ESRI GPS KML Ny fahatsapana voalohany shp
ArcGIS-ESRI, GPS / Fitaovana, Engineering, topografia
Minitra fohy 6 ho an'ny ConstrucGeek
Manoro hevitra aho ny hanokana fotoana hahalalana ilay bilaogy, izay efa mahatratra herintaona izao. Ny tiako holazaina dia ConstrucGeek, ny enina minitra antenainao handanianao mamaky geofumed vaovao dia tokony hampiasaina ao amin'ity bilaogy ity. Roa ihany no azo atao: ny fahatsapanao fa ny lohahevitra CAD mifandraika amin'ny injeniera dia tsy ...
Blog Ny fahatsapana voalohany
AutoCAD-Autodesk, Engineering, fanavaozana, Pirinty voalohany